Imibono evamile eyiphutha ezweni le-anabolic steroid | I-AASraw
/Blog/Gallery/Imibono evamile eyiphutha ezweni le-anabolic steroid
Posted on 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 wabhala ku Gallery.
Lokhu kuzoba ukubuka konke okujwayelekile kakhulu ngezinjongo zolwazi kuphela, akuyona indlela yokuqondisa. Lokhu akusho ukuthi ngiyakuvumela ukusetshenziswa kwayo futhi akuwona ukwamukelwa kokusetshenziswa.
Imvamisa kungaqondwa kahle noma kuhlukaniswe ngendlela engeyiyo- kunezinhlobo ezahlukene zama-steroid. Ama-Corticosteroids, anemiphumela emibi emibi kune I-Anabolic Steroids, ngasizathu simbe ayidonswa ngabezindaba futhi ukusetshenziswa kwayo empeleni KUKWAMUKELEKILE ezimweni eziningi- kufaka phakathi ezemidlalo nezobuchwepheshe. Zivame ukusetshenziselwa ukulwa nokuvuvukala. Kukhona neProgesterone esetshenziswa ezinhlotsheni eziningi zokulawulwa kokuzalwa futhi ethathwa yizigidi zabesifazane nsuku zonke. I-Anabolic steroids (lapha ibizwa nge-AS noma AS) yilokho abantu abaningi abakucabangayo lapho beqala ukuzwa i- "steroids" nazo zonke izinto ezimbi ezihambisana nazo.
Wonke umuntu uhlangabezana nezinhlangothi ezihlukile. Abekho abantu ababili abafanayo. Ukusho ukuthi BONKE abantu bazohlangabezana nento efanayo kuwubuphukuphuku. Abanye abantu banobunzima obunzima bokuqonda lokhu njengoba kubonakala kwintambo ye-lambesis. Kunomphumela owodwa kuphela wokuthi bonke abasebenzisi * besilisa baqinisekisiwe- futhi lokho kuyi-testicular atrophy.
A) I-testicular Atrophy- lapho ufaka amanani amaningi we Testosterone i-HPTA yomzimba wakho iqala ukucisha (iyeka ukukhiqiza i-Testosterone ngoba umzimba wakho usuphola ngaphezu kokwanele); Ngamafuphi lokhu kudala ukuthi amabhola akho anciphe. Isikhathi esiningi akubonakali. Mhlawumbe ukunciphisa okungu-25%, okungu-50% kakhulu. Lapho usuphelile umjikelezo, sebenzisa i-PCT yakho (Ukwelashwa kokujikeleza komjikelezo) babuyele ngosayizi ogcwele. Akukhona unomphela. Abanye abantu basebenzisa i-HCG (i-Human chorionic-gonadatropin) ngenkathi besemjikelezweni ukugcina amabhola abo esayizi ephelele futhi kusiza nokululama ngoba kugcina amaseli akho e-leydig esebenza.
B) Ukuncipha / ukuncipha kwezinwele: I-AS ayibangeli uludwebu noma ukuncipha kwezinwele. Kodwa-ke, ingasheshisa inqubo. Uma ukulahleka kwezinwele kugijima emndenini wakho, ungamangala ukuthi uzoba yilowo ozothatha izintambo zokusheshisa le nqubo. UBill Roberts wabhala ngezinhlobo ezimbili ezahlukahlukene zamaSteroids- Uhlobo I no Type II; Thayipha amakhompiyutha amakhulu njenge-Testosterone, iTren, i-Decca, iSust, njll bese uthayipha uhlobo II lolo I-Winstrol (stanazolol), i-dbol, i-anavar, i-Masteron njll Iningi labantu lisola izidakamizwa ezifana ne-Winstrol ne Masteron Enanthate (Drostanolone) njengesikhubekiso sokulahleka kwezinwele futhi uzame ukugwema lezo zidakamizwa uma ukhathazekile nge-MPB, lapho lokho kungesona isimo- nginomphumela obonakala kakhulu ku-MPB (impandla yephethini yowesilisa) kunezinye izinhlobo zemithi. Futhi kusobala ukuthi izidakamizwa ezisuselwa ku-DHT (njenge-deca) zizoba nzima kakhulu ekhanda lakho. Ukuphela kwendlela yokulwa nalokhu ukuthatha iFinasteride (propecia / proscar) ezinye izinhlobo zamashampu zohlobo lwe-rogaine nezinye izinto ezimbalwa.
C) Izinduna- abanye abantu bavele ngobuso; abanye abantu bagqashuka esifubeni noma emhlane ... futhi isikhumba sabanye abantu siyasula. Futhi, wonke umuntu uthinteka ngokuhlukile.
D) Nginomuzwa wokuthi lokhu bekufanele ngabe kumbozwe ngaphansi kwe-atrophy yamasende futhi ngivele ngikhohliwe. Izikhathi eziningi ngizwa abantu bekhuluma nge-AS okwenza udokotela wakho anciphise, lapho empeleni esho amabhola akho. Ngakho-ke, ukucacisa, u-dick wakho akanciphi futhi lokho kunengqondo kakhulu njengokusho ukuthi ukuthatha isifutho samakhala kunciphisa ikhala lakho. Uma kukhona, negazi eliningi eligelezela kuleyo ndawo ngingathi uzothambekela kakhulu ekwenzekeni okuphambene nalokho. Futhi kuya ngemixube oyiphuzayo- eminye imishanguzo efana neDeca neTren ingaba nokhahlo kwi-libido yakho (yingakho ibinzana elithi, “deca-dick”) kanti abanye abantu bakhethe ukuthatha I-Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) noma i-viagra (awudingi) kodwa ezinye izidakamizwa ezinjengeTest up Test (noma yiluphi uhlobo) noma i-dbol kuzodingeka ukuthi ukhuphuke izindonga futhi uqhanyelwe nje njengo… .. Amantombazane amaningi anendoda isoka emjikelezweni kubonakala sengathi lijabulela umfana wabo ukuba semjikelezweni, lol.
E) "Roid-rage" - Ayikho into enjalo. Kulula kanjalo nje. Uma ungumuntu ongazinzile, yebo, bazokukwenza uzinze ngokwengeziwe. Kepha-ke futhi, ezinye izinto eziningi nemithi kungenzeka izodala lokho nayo. Uma ungazinzile ngokwengqondo noma utholakale ukuthi unenkinga yengqondo akufanele ucabange ukuthatha ama-steroids. Ngifisa sengathi kungashiwo okufanayo nangotshwala. Iningi labantu alithinteki kulokhu. Iningi labantu lizizwa sengathi lisesimweni esingcono noma alihlukile neze. Ngiyabona abantu mhlawumbe bathola i-cockier ngoba bakhudlwana futhi banamandla kancane, kepha ngaphandle kwalokho, noma yini ebika "i-roid-rage" (isikhungo sikahulumeni noma cha) i-horseshit.
F) Ukufa / ukwehluleka kwezitho / njll.
Ama-steroid awabangeli ukuthi abantu bafe noma aholele ekufeni kwabo ngenxa yokusabela okuthile okungathandeki. Akuzange kube khona izifundo zesayensi ezibonisa ukuxhumana okuqondile kuma-anabolic steroids nokufa. Abantu bazokhomba uZyzz, kepha ngeke bakhombe umlando womndeni wakhe wesifo senhliziyo / izimo futhi angicabangi ukuthi ukuhlolwa kwesidumbu kwake kwenziwa emphakathini? Ukucaphuna izibalo ze-CDC kusuka ngo-2005 kusuka kuBigger Stronger Faster:
Abantu be-75,000 ngonyaka bafa ngotshwala
Abantu be-435,000 ngonyaka babulawa nguTwayi
nokufa okuvela kuma-anabolic steroids ……: 3
Izingozi zama-steroid zihaba ngokweqile. Iqhathaniswa kakhulu nesimo nePitbulls. Abantu abaningi ngonyaka bafa ngokushaywa ekhanda ngamakhukhunathi noma nje ngokuwa ezitebhisini.
Yebo, uma ama-steroids enziwa ngendlela engafanele kungaba yingozi. Ama-Oral steroids (njenge-dbol, winstrol, anavar, njll.) Ane-hepatoxic futhi angaba nokhahlo kakhulu esibindini sakho uma uthathwe imithamo ephezulu kakhulu futhi isikhathi eside kakhulu… futhi uma uphuza utshwala ngenkathi usemjikelezweni. Kungakho kunconywa ukuthi kwenziwe amaphaneli egazi ngaphambi komjikelezo, phakathi nangemva kwawo. Ukuthatha izinto ezinjengekhakhasi lobisi kungasiza ukwehlisa umthwalo esibindini sakho.
Ingcindezi yegazi ingakhuphuka futhi, futhi izokhuphuka, futhi ngokuya ngokuya ngamakhompiyutha owathathayo (ikakhulukazi I-Methandrostenolone (Dianabol) powder kanye ne-EQ). Ukuthatha ilayisi elibomvu kungasiza ukugcina i-cholesterol ne-BP kuhlolwe. Impela kuyinto edinga ukubhekwa. Futhi nakanjani kuyisizathu sokuthi kungani kufanele ngabe udla OKUHLANZEKILE ngenkathi uhamba ngomjikelezo- ungadli i-pizza, ama-burger namafriji.
Eminye imibono eyiphutha
Ama-steroid aphuza ngemithambo yegazi- hhayi ngemithambo yegazi. Akukho ukugoqa ibhande engalweni yakho noma yini. Ukube ubungajova emthanjeni noma emthanjeni ophelile ungahle ufe. Kunezindawo ezithile zomjovo- amabhande aphephe kunazo zonke, ama-quads, ama-glutes kanye nesayithi le-ventro-gluteal. Abantu bavame ukucabanga ukuthi imbongolo / i-glutes yindawo ephephe kunazo zonke, angivumelani ngoba kunzima ukufinyelela futhi ngoba i-nerve ye-sciatic isebenza kakhulu kuleyo ndawo futhi uma ushaya lokho, sikufisela inhlanhla ngempilo yakho yonke.
Ama-steroid kukhona futhi akuyona isidakamizwa esiyisimangaliso. Ungahlala kusofa udle ama-chips amazambane mhlawumbe ube mkhulu, kepha uma kungukuthi uzokwenzani lapho uwathatha, akufanele uzihluphe ngokuchitha imali yakho. Kusamele wenze umsebenzi. Kusamele ngidle kuhlanzekile- ngingasho ukuthi ngihlanze kakhulu. Kusafanele unake konke.
Ama-Pro-hormone akuyona enye indlela ephephile ye-steroids ngoba ungayithenga ku-GNC / Complete Nutrition / Nomaphi. Ziyingozi KAKHULU futhi kaningi awunakuthenga imishanguzo yangempela ye-PCT lapho-ke bese uthola indlela ebabazekayo yokuthola kabusha uma ululama nhlobo. Ziningi izingane esezigcine ku-TRT impilo yazo yonke ngenxa yalokhu. Angiqondi ukuthi akukaze kube khona yini icala ngemuva kokumangalelwa ngalezi zitolo.
Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Dianabol Powder Ukudayiswa
Ngabe iMK-677 (Ibutamoren) isebenza kahle Ekwakheni Imisipha? Isibuyekezo Sarm [OKUSHA] Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga We-SARM SR9009 Ukwakha Umzimba